DJ Video Loop ise (Ocean) - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2020
DJ Video Loop ise (Ocean)
Edozila ihuenyo ojii n'oge setịpụrụ gị! Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị vidiyo maka otu abụ, ị ka nwere ike ịhụ anya iji jide oge ị ga-aga. Kasị mma, mee ya otu n'ime bọtịnụ vidiyo DJ anyị, ahaziri aha gị. Mee ka akara aka gị ma zere inwe ndị mmadụ na-eche na setịpụrụla setịpụrụ gị n'ihi na ihuenyo ahụ apụla.
Edere akụrụngwa na ụda egwu dị na vidiyo a, kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Video Dj - aha aha aha na logo loops iji mee ihe na VJ anya mgbe ị na-enweghị vidiyo nke abụ ị na-akpọ. Gwuo logo gị ugboro ugboro karịa inwe ihuenyo nwa. A na-ahazi ihe niile. Enweghị olu. (ma a na-agbanye ụda olu / ụda olu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) Maka ndị ọkachamara ọkachamara, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, hotels na casinos naanị.
Site na ndị okike nke NYECOUNTDOWN.com